အာကာသထဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingအာကာသထဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာများ
September 26, 2021 Yan Amazing, Knowledge 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာတော့ အာကာသထဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာတွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နက်ရှိုင်း ကျယ်ပြောလှတဲ့ အာကာသထဲမှာ ဘယ်လိုအရာတွေကို ရှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ထူးဆန်းတဲ့ ရေဒီယို ဆင်ဂနယ်
(၂၀၀၇ ) ခုနှစ်တုန်းက သုတေသီတွေဟာ မီလီစက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ultrabright ရေဒီယို ဆင်ဂနယ် တစ်ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုး ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စေတဲ့ အလင်းရောင်တွေကို အလျင်အမြန် ပေါက်ထွက်တဲ့ ရေဒီယို ( FBRs) လို့ ခေါ်ပြီး သူတို့ဟာ ကမ္ဘာမြေရဲ့ အလင်းနှစ် သန်းပေါင်းများစွာ အကွာအဝေးက လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
မကြာသေးခင်တုန်းက သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ FRB တွေကို ဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ခဲ့ပြီး တစ်ကြိမ် မှာ ( ၆ ) ခါ လောက် လင်းတဲ့ flashes တွေကို ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ထပ်လောင်း ဖြေရှင်းချက်အရ ဒီလိုမျိုး ထူးဆန်းတဲ့ ရေဒီယို ဆင်ဂနယ်တွေဟာ ဂြိုဟ်သားတွေ ဆီက လာတာတော့ လုံး၀မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပညာရှင်တွေက အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Haumea ဂြိုဟ်
လူပု ဂြိုဟ်လို့ ခေါ်တဲ့ Haumea ဟာဆိုရင် နတ်ပကျွန်း ဂြိုဟ် အပြင်ဘက်က Kuiper လမ်းကြောင်းထဲမှာ လှည့်ပတ်နေတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပညာရှင်တွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ Haumea ဂြိုဟ်ဟာ ထူးဆန်းစွာ ဘဲဥ လိုမျိုး ရှည်ရှည်မျောမျော ပုံစံရှိပြီး လ ( ၂ ) စင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ တစ်နေ့တာကို ကုန်ဆုံးဖို့အတွက် ( ၄ ) နာရီပဲ ကြာမြင့်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
( ၂၀၁၇ ) ခုနှစ် တုန်းက နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေဟာ ကြယ်တစ်လုံးရှေ့ကို Haumea ဂြိုဟ် ဖြတ်သွားပုံကို စောင့်ကြည့် လေ့လာနေရင်း ဒီ ဂြိုဟ်မှာ ပါးလွှာတဲ့ ဂြိုဟ်ပတ်ကွင်းလေးတွေ ရှိနေတာကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီလို ဂြိုဟ်ပတ်ကွင်းလေးတွေ ရှိနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ အလွန်ကြာမြင့်လှတဲ့ အချိန်တွေတုန်းက ဂြိုဟ်အချင်းချင်း တိုက်မိခဲ့ရာကနေ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုလို့ ပညာရှင်တွေက ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Rogue ဂြိုဟ်က ဥတ္တရ အလင်းတန်းများ
ဂလက်ဆီ ထဲမှာ လွင့်မျောနေတဲ့ rogue ဂြိုဟ် များစွာရှိပြီး ဒီဂြိုဟ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ မိခင်ကြယ်ကနေ ဆွဲငင်အား ဖိအားတွေ ကြောင့် လွင့်စင်လာခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို rogue ဂြိုဟ်တွေထဲမှာမှ SIMP J01365663+0933473 လို့ ခေါ်တဲ့ ဂြိုဟ်ဟာ ဆိုရင် ကမ္ဘာမြေ နဲ့ အလင်းနှစ်ပေါင်း ( ၂၀၀ ) ကျော် အကွာအဝေးမှာ ရှိပါတယ် ။ ဒီ ဂြိုဟ်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ သံလိုက် စက်ကွင်းဟာ ဂျုပီတာ ဂြိုဟ်ထက် အဆပေါင်း ( ၂၀၀ ) ကျော် သန်မာပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
အခုလိုမျိုး ပြင်းထန်တဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ဒီ ဂြိုဟ်ရဲ့ လေထုထဲမှာ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်းနေတဲ့ ဥတ္တရအလင်းရောင်တွေကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်တစ်ချက်က ထိုဂြိုဟ်ပေါ်မှာ လင်းနေတဲ့ ဥတ္တရ အလင်းရောင်တန်းတွေကို ပညာရှင်တွေဟာ ရေဒီယို တယ်လီစကုပ် ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါတဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ အာကာသထဲက အနီအောက်ရောင်ခြည် စီးကြောင်း
နယူထရွန်ကြယ်တွေ ဟာဆိုရင် ပုံမှန် ကြယ်တစ်လုံး သေဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ထူထပ်သော အရာ၀တ္တုများစွာကို ပေါင်းပြီး စုဖွဲ့ထားတဲ့ ကြယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံမှန် အားဖြင့် ဒီကြယ်တွေဟာ ရေဒီယို လှိုင်း ( ဒါမှမဟုတ် ) X-Rays လိုမျိုး အလွန်အားပြင်းတဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေကို ထုတ်လွှတ်လေ့ရှိကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
( ၂၀၁၈ ) ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာ လ တုန်းက နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာမြေ ကနေ အလင်းနှစ်ပေါင်း ( ၈၀၀ ) ကျော် အကွာအဝေးမှာ ရှိတဲ့ နယူထရွန် ကြယ်တစ်ခုကနေ ရှည်လျားတဲ့ အနီအောက် ရောင်ခြည်တန်းကြီးတစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ် ။ သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုပြုချက်ကတော့ ဒီ နယူထရွန် ကြယ်ရဲ့ ပတ်လည်မှာ ရှိတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ ကြောင့် ဆင်ဂနယ်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်တာလို့ ပြောပေမယ့် တိကျတဲ့ အဆိုပြုချက်တော့ မထွက်ရှိသေးပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ထူးဆန်းတဲ့ Hyperion လ
ဆိုလာ နေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့ လ တွေများစွာရှိပြီး ဒီအထဲမှာမှ စေတန်ဂြိုဟ်ရဲ့ ဂြိုဟ်ရံလ တစ်စင်း ဖြစ်တဲ့ Hyperion လည်း ပါဝင်ပါတယ် ။ Hyperion လို့ အမည်ရှိတဲ့ လ ဟာ မီးခိုးရောင် ကျောက်သား အပွတွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူ့ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်လည်း မရေ မတွက်နိုင်တဲ့ ချိုင့်ခွက်ပေါင်း များစွာ ရှိပါတယ် ။ ( ၂၀၀၄ ) နဲ့ ( ၂၀၁၇ ) ခုနှစ် ကြား ကာလတွေတုန်းက နာဆာ ရဲ့ Cassini အာကာသ ယာဉ် ဟာ စေတန်ဂြိုဟ်ရဲ့ စနစ် ထဲကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာပဲ Hyperion လ ကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ လျှပ်စစ် အမှုန်ရောင်ခြည်လေးတွေ ဟာ အာသကာသထဲ စီးဝင်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ အာကာသထဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com